ISITAMPU SEPATIO YEKHONKRITHI (IINGCAMANGO ZOYILO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Isitampu sePatio yeKhonkrithi (Iingcamango zoyilo)
Apha sabelana ngegalari yethu yoyilo lwekhonkrithi olubunjiweyo kubandakanya izitena, ilitye leflegi, ilitye lembombo kunye neengcinga zesilayidi zaseRoma.
Ipatio yakho yinxalenye ebalulekileyo yekhaya lakho. Inokusebenza njengendawo yokonwabisa abahlobo ngexesha le-barbeque yasehlotyeni okanye ukuba nemini ephumlileyo echibini. Kuba iyinxalenye yendlu yakho, uyakufuna ukuqinisekisa ukuba ijongeka intle. Xa uqala ukukhangela ngeenxa zonke, ukhetho onalo lunokubonakala lukhulu.
Namhlanje siza kuqhekeza enye yezi zikhetho kuyo yonke into ofuna ukuyazi: izitampu zekhonkrithi ezinesitampu. Kuba Uyilo lwamatye ndwendwela eli phepha.
Iipatheni zeKhonkrithi eziSitampu kunye neZitayile
Ikhonkrithi enamatampu eCobblestone
Ikhonkrithi efakwe kwiFlagstone
Ikhonkrithi eSitampu seWood
I-Slate yamaRoma iSitampu seKhonkrithi
Imibala yeSitampu yeKhonkrithi
Iindleko eziXutywe ngeKhonkrithi
Ikhonkrithi ihlala ixesha elingakanani?
Iingxaki zeKhonkrithi ezinesitampu
Ikhonkrithi enamatampu Vs. Pavers
Ikhonkrithi enamatampu Vs. Iindleko zokuPaka
Ngaba Ikhonkrithi esele ikhona inganyanzelwa?
Ngaba Ikhonkrithi eSitampu inokupeyintwa?
Isitampu sePhuli yeKhonkrithi enamatampu
Ngaba isitampu sekhonkrithi sityibilika?
Ikhonkrithi enesitampu yindlela entle yokufumana uyilo oluphezulu ngaphandle kweendleko eziphezulu. Indlela olu hlobo lwepatio efakwe ngayo yikhonkrithi ethululelwa kwindawo yepatio- njengepatio yekhonkrithi. Nje ukuba ikhonkrithi ithululwe, isitampu sayo ngokukhetha kwakho iintlobo ngeentlobo zoyilo.
Ukwenza ezi patheni, izitampu eziguquguqukayo nezikhulu ze-polyurethane. Nganye kwezi zitampu zihlala zijikeleze iinyawo ezimbini zii-2 inyawo kunye nee-intshi okanye isentimitha ezimbini ubukhulu.
Ikhontrakthi yakho inokucinezela ezi zinto kwikhonkrithi okanye zinokusebenzisa isixhobo sokuthintela ukwenza njalo. Ikhontrakthi iya kutshiza isitampu ngaphambi kokusetyenziswa ukuqinisekisa ukuba akukho zikhonkrithi zincamathelayo kuyo ngelixa isetyenziswa.
Ngenxa yale nkqubo, uninzi lwabanini makhaya baqinisekisa ukufakwa kobungcali kunokuba bayithathe njengeprojekthi ye-DIY. Ngelixa i-DIYer enamaxesha isenokukwazi ukuyikhupha, yinkqubo enzima enezinto ezizodwa kunye nazo naziphi na iimpazamo ezisengozini yokuba sisisigxina.
Xa abantu abaninzi becinga ngeepasta zekhonkrithi, bacinga ngee-slabs ezilula ezingwevu. Njengoko sele sithethile, oku akunjalo xa kufikwa kwikhonkrithi yesitampu.
Ngeendlela ezininzi onokukhetha kuzo, kunokuba nzima ukuba ungakhethi nje kuphela kodwa wazi ukuba loluphi ukhetho ekufuneka uluthathile. Ke, makhe sijonge kwezinye zeepateni ezithandwayo ukufumana umbono ngalo.
Ngokwenene iipatio zezitena inokukuxabisa kangange- $ 20 ngonyawo wesikwere. Oku kuthetha ukuba ziindaba ezimnandi zokuba unokufumana ipateni efanayo ngeqhezu lexabiso. Ikhonkrithi enezitena yindlela elungileyo yokunika ipatio yakho ukubonakala kweklasikhi kunye nokufana.
Ikhonkrithi enezitena ayisebenzisi nje iseti yoxande ukwenza imilo. Inkohliso epheleleyo inikezelwa ngokufaka isitampu kwitena ebunjiweyo enombala ofanele ukufana nenyani. Ngamanye amagama, unokufumana umfanekiso omnandi wokutshica ubume bezitena.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba nayiphi na ipateni yezitena inokusetyenziswa. Eyona patheni isetyenziswayo sisibophelelo esibalekayo- le yeyona patheni yenziwa ziindonga zezitena. Izibophelelo zesitaki zilandela intambo enye kodwa zibambe ngokuthe nkqo.
Xa kuziwa kwiipatios, uninzi lufuna ipateni ekhethekileyo yezitena. Iibhasikiti zezonka ziyathandwa kwaye zisebenzisa indawo ethe tyaba nethe nkqo. Ukuluka kweebhasikidi ezihambelanayo zisebenzisa umbono ofanayo ngesilayidi esincinci. Uyilo lweHeringbone lusebenzisa ipateni ye-zigzag enokuthi ilandelwe kwakhona kwizitrato ezinamatye kubukhosi baseRoma.
Ibhondi yaseSpain intle kodwa, kwisitena sendabuko, kunzima. Kubandakanya iphethini yezine, zizele ngaphandle izitena ezisongele embindini wezitena. Icandelo ngalinye lenze malunga nesikwere sonyawo. Kuba ikhonkrithi enesitampu ayifuni ukwenza izitena, oku kunokuba yindlela elungileyo yokufumana isitayile esimbaxa.
ICobblestone ihlala ihlonitshwa ngobuhle bayo beklasikhi. Sikholisa ukuyidibanisa neendlela zeenqwelo ezitsalwa ngamahashe kunye neendawo zokugcina ezembali. Ngenxa yoku, kunokuba kukuncoma okukhulu ezindlini ezindala okanye kwabo bamkele imixholo efanayo.
Kanye njengezitena, kukho inkululeko eninzi kwiipateni zelitye lenyengane. Banokuba sisibophelelo esiqhelekileyo sokubaleka okanye ukuprinta kwesikwere ecaleni-ecaleni. Ingathabatha iipateni ezingaphezulu kwesetyhula ezihamba zisiya kwenye ukuyila uyilo oluhle.
Ukuba ufuna ngenene ukuziva ngembali kunye nelitye lakho, unokuya kwimodeli yoqobo, ebukhali. Oku kuhlala kubandakanya ukukopa ukumila kwamatye angaqhelekanga, ajikelezileyo kunye nokuvela okunzulu phakathi kwawo.
Ezi patheni zingalinganiyo ziqinisekile kwindlela eyaqala ngayo i-cobblestones kodwa kunokuba ngumceli mngeni kumntu ongahambelaniyo nokuhamba kancinci.
Ilitye lelitye lilitye elisicaba elisetyenziselwa ukuhamba, iipatio, ukutyibilika, kunye nokubiya. Ngelixa lingaphezulu kwale mihla kunelitye lembombo, iipalios zeflegi sele lukhetho oludumileyo ixesha elininzi.
Iipatios zamatye zalo naluphi na uhlobo ziyaxatyiswa ngenkangeleko yazo yohlobo oluthile. Ezi zitampu zihlala zifana namatye aneemilo ezingaqhelekanga, okuthetha nokuba iipatios ezinoluvo olufanayo zinokubonakala zahlukile.
Kuba olu hlobo lwesitampu lwenzelwe ukuba lufane nelitye, inokuvelisa imibala eyahlukileyo nayo. I-caatat yeyokuba ukuba ufuna isitampu esikhangeleka ngathi siyinyani, ihlala ibandakanya uyilo olugciniweyo ngesandla kunye nofakelo olunzulu, yiyo loo nto iza nexabiso lentengo ephezulu kunezinye iipateni.
IFlagstone iyanconywa ngenxa yomphezulu wayo ogudileyo. Ngelixa usebenzisa imilo eyahlukeneyo, umphezulu uhlala endaweni ethe tyaba.
Ikhonkrithi enesitampu ikwaluncedo ngaphezu kwelitye lokwenene kuba umngcipheko wokukhula kwengca phakathi kweemilo zamatye awaziwa kakuhle ngokulondolozwa kwelungelo. Olu ncedo lwenza ukuba ibe yenye yezona ndlela zilula zokuhamba.
Ikhonkrithi eyenziwe ngokhuni lukhuni lukhetho olunikezela ngobuhle bokhuni ngaphandle kokuncipha kokukhetha iinkuni.
Umgangatho weplanga kunye neepatios zidinga isixa esibalulekileyo sokugcina kule minyaka idlulileyo, ngelixa isitampu sekhonkrithi somthi kufuneka siphinde sigcinwe kwimeko apho umbala uqala ukubuna.
Ikhonkrithi eyenziwe ngomthi ikwimo yomelele ngakumbi kunokomgangatho wokwenziwa kweenkuni onokuthi uthambekele kwizikhewu kunye nokukrwela.
Ikhonkrithi enamatampu enkuni inokucocwa ukuba ifane phantse nalo naluphi na uhlobo lweenkuni, ngoko ke inokwenziwa ngokulula ukuze ithelekise uhombiso olukhoyo ekhaya.
Oku kunika abaninimzi uluhlu lwezinto abanokuzikhetha malunga nokuba zilungele ntoni na ukuhonjiswa kwazo. Ngokusisiseko, banokuphantse babenokhetho oluninzi njengoko bebeya kuba nalo xa bekhetha izitayile zomthi-nokuba kude kube kukuxeliswa kweepateni zokutya.
Olunye uncedo lwekhonkrithi eyenziwe ngomthi lixabiso layo elifikelelekayo, elisezantsi kunelo lomthi wemveli.
Isilayiti saseRoma mhlawumbi yenye yeendlela ezikhethiweyo zoyilo onazo ngelixa unikezela ngumahluko ocacileyo ukusuka kumgangatho ogqityiweyo wekhonkrithi.
Okuninzi kolu thelekiso kuvela kwinto yokuba isileyiti yaroman ihlala isetyenziswa kwiithayile ezinkulu okanye ezinkulu, eziqhubekayo ngakumbi. Isileyiti yamaRoma nayo inokuthatha ngakumbi ipateni emile okwezitena, kodwa le ayisiyiyo ifom yayo ethandwayo.
Nokuba ukubalwa kobume bayo, kukho umahluko ocacileyo kwisilayidi samaRoma xa kuthelekiswa nekhonkrithi ecacileyo. Oko kukuthi, yenziwe ngombala.
Izitampu zesilayiti zamaRoma zenziwe ukuba zifane neepateni zendalo onokuzilindela kwilitye elinika into eninzi bacinge ngokubonakala okumgangatho ophezulu.
Ezi zinto zinxitywayo zikwadityaniswa kunye neepateni zombala ezinomdla. Kuba ziyilelwe ukuba zendalo, kuyinto eqhelekileyo ukuba imibala okanye isibini semibala sisebenzise.
Obu bunjani bukwanconywa ngenxa yokuguquguquka kwayo okuvumela ukuba ilingane phantse nakuphi na uyilo loyilo. Ngenxa yokuba umphezulu wayo ujijekile kancinci ngaphandle kokudakumba okunzulu, lukhetho oluqhelekileyo kwiipatioside ezinamachibi kuba kulula ukuhamba kwaye inceda ukongeza ukubambeka ngakumbi kunekhonkrithi engacinywanga.
Isibheno esikhulu kwikhonkrithi esistampu ecaleni kweziprinti ngokwazo kukukhetha umbala phakathi kwabo.
Ngelixa iidayi zinokudityaniswa nekhonkrithi ngaphambi kokuyigalela ngombala owomileyo kumphezulu wekhonkrithi ngaphambi kokuyinyathela ime ngenye indlela. Kufanelekile ukujonga ngakumbi kwezi nkqubo.
Ngenye, kukho imibala eyahlukileyo. Oku kwenziwa ngokufaka ikhonkrithi uqobo ngemibala etyebileyo kwaye enganyangekiyo ukuphela ngexesha lenkqubo yokuxuba.
Kwelinye icala, kukho iziqinisa ezomeleleyo ezingcangcazelisayo zombala. Oko kuza njengempuphu. Ezi zisetyenziswa ngokuthe ngqo emva kokubekwa kwesamente. Ngelixa ekuqaleni usasaza ngesandla emva koko ufakele nzulu ngokusetyenziswa kokudada okanye itrowel. Le yimibala ebekwe phambi kokunyathela.
Endaweni yokuxhomekeka kwenye okanye kwenye phakathi kwezi, iikontraki ezininzi ziyisebenzisa kunye. Oku kuvumela ukuba benze ubunzulu ngakumbi kunye noyilo oluhlala ixesha elide.
Kukho iinketho ezimbalwa zombala xa kuziwa kwisitampu sekhonkrithi. Kukho iipateni ezimbalwa ezisetyenziswa rhoqo kunabanye.
Uyilo olumhlophe-mhlophe lunomtsalane omkhulu. Ukuqala, kudala isiphelo esigqibeleleyo, esibukekayo kunye nesimanje. Ukongeza, ihlala ipholile nangaphantsi kwemini yelanga elishushu. Oku kuyigcina ikwimfuno ephezulu kakhulu yeephuli zamachibi.
Imibala eyahlukeneyo ikwayinto eqhelekileyo, ngakumbi ngekhonkrithi enezitena. Oku kunokwenziwa ukulinganisa ukubonakala kwamatye endalo. Oku kunokubiza ngaphezulu kuba iikontraki ezininzi zifaka umbala ngekhonkrithi ngesandla okanye zisebenzisa imixube yesiko.
Ngokubanzi, injongo yepatio yekhonkrithi, ngesiqhelo, kukutshatisa uyilo olukhoyo loyilo lendlu yakho. Ngale ndlela, uyilo alunamthungo kwaye alungqubani.
Ngelixa i-aesthetics inzima kakhulu kwizigqibo zoyilo lwasekhaya, indleko zoyilo olo zidlala indima enkulu kubanini bamakhaya abaninzi. Apha, siza kudiliza iindleko eziya kuthenga, ukufaka, kunye nokugcina ipatio yekhonkrithi kunye nokuthelekisa nezinye iindlela.
Ke kubiza malini ukubeka ipatio yesamente? Ikhonkrithi enesitampu ayibizi njengoko unokucinga kodwa kukho umahluko kwixabiso kuxhomekeke kwinto oyikhethayo.
Ukuba uhamba ngombala omnye kunye nephethini enye, unokulindela ukuhlawula i- $ 8- $ 12 ngeenyawo zenyawo. Imibala emibini ukuya kwemithathu kunye nomda owahlukileyo uya kuyizisa kwi- $ 12- $ 18 ngonyawo wesikwere. Ixabiso linokutsiba phezulu kwiipateni ezintsonkothileyo okanye kuyilo olugcotshwe ngesandla.
Ngokuthelekisa izinto zokwenyani ezinesitampu sekhonkrithi zilinganisa iipateni, nangona kunjalo, eli lixabiso elithengekayo. Isitena, umzekelo, ixabisa i-14 yeedola ukuya kwi-20 ngeenyawo zenyawo xa ilitye, imarble, okanye isileyiti zihlala kuluhlu lweedola ezili-17 ukuya kwi-28 ngeenyawo zenyawo.
Iindleko zepatio yekonkrithi egxininisiweyo ixhomekeke ngaphezu kweendleko zekhonkrithi yedwa. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kuxhomekeke kuhlobo lwepateni oyikhethayo. Ukukhetha okunje ngokusetyenziswa kwebala kunye neepatheni zoyilo ezininzi kuya kusebenza ngexabiso eliphezulu.
Njengalo naluphi na olunye ulungiso lwasekhaya, ubude bexesha lesitampu sekhonkrithi yinto ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele ngaphambi kokuba ifakwe. Ngeendleko zokufakelwa njengoko kunjalo, kubalulekile ukuba imveliso iya kuhlala ixesha elide kangangoko kunokwenzeka.
Kwixesha elidlulileyo, ikhonkrithi enesitampu yayithambekele ekuqhekekeni kwangaphambili, kwaye ke ubomi obufutshane kunekhonkrithi yemveli.
Kwiminyaka yakutshanje, nangona kunjalo, kuye kwalula ukuba isitampu sekhonkrithi kubunzulu obufanayo, sonyusa ixesha lokuphila kakhulu. Ikhonkrithi enesitampu ngoku inexesha lokuphila elifana nelo lekhonkrithi yemveli, elihlala malunga neminyaka engama-25.
Iitywina ezisetyenziswe kwikhonkrithi enesitampu zinokuyenza ihlale ixesha elide kancinci kuneqabane layo lesiko. Ezi tywina zongezwa ukukhusela umgangatho woyilo kunye nombala, kodwa zinokuthintela nokuqhekeka.
Njengobudala bekhonkrithi, inokuqala ukubonakala ichalk okanye iphele. Oku kunokubuyiselwa umva ngokongeza umaleko omtsha wesitywina, ekufuneka wenziwe rhoqo kwiminyaka emithathu ukuya kwemine.
Ewe kunjalo, ngelixa ibonelela ngexabiso elininzi, isitampu sekhonkrithi ineengxaki zayo njengayo nayiphi na into onokuyisebenzisa.
Kwelinye, imibala yomphezulu esetyenzisiweyo kwikhonkrithi yesitampu ayisoloko ihleli ixesha elide njengekhonkrithi uqobo. Ngethamsanqa, oku kungaliwa ngokuba nedayi ixutywe nekhonkrithi ngaphambi kokuba ithululwe kwaye igximfizwe njengoko kuchaziwe ngaphambili.
Kukho inkxalabo yokudakumba okunzulu kodwa oku kuyehla nakwizinto ezikhethiweyo zoyilo. Ukuba ukhetha uyilo olunzulu lokuseta, inokuba yingxaki kwabo bahamba kancinci.
Izikhokelo ze-ADA zibonisa ukuba akukho miqolo ifanele ibe ngaphezulu kune-¼ xa uhlala kwabo banesiphene sokuhamba.
Enye ingxaki ekufuneka uyiqwalasele kukuba ukuba ikhonkrithi ibekwe ngendlela engalunganga unokuba neendawo ezijikeleze iipateni ezinesitampu. Ukuyiphepha le nto, licebo elihle ukujonga macala onke ukuba abantu bathini malunga nekhontraktha abayicingayo ngaphambi kokuba baqeshe.
I-spanx yengubo yomtshato engenamqolo
Inqaku elinye elinokuthi abanye baqwalasele ukubuyela umva kukuba ikhonkrithi ithatha ixesha ukuseta. Ngexesha nasemva kofakelo, kuya kufuneka ukulungele ukunqanda ipatio yakho kangangeentsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 ukuze ungonakalisi uyilo. Inokukunceda ekwenzeni umsebenzi ngexesha lonyaka ongayi rhoqo kwipatiyo yakho.
Funda ngakumbi malunga Ukulungiswa kunye nekhonkco lekhonkrithi Apha.
Ewe kunjalo, xa ujonga uyilo lwepatio, kubalulekile ukucinga ngohlobo olubanzi lwezinto onokukhetha kuzo. Kunye nekhonkrithi enesitampu, ukhetho lweepheyiji luhlala luvela. Ke, kuyafuneka ukuba ucinge ngezi zikhetho zilinganiswe ngokuchaseneyo.
Okokuqala, zombini uyilo luvumela ukwahluka okuninzi kodwa kukho inqaku xa isitampu sekhonkrithi siphumelele. Ngelixa iipavers zithintelwe ikakhulu kuyilo lwamatye, isitampu sekhonkrithi, njengoko besesitshilo ngaphambili, sinokulinganisa nantoni na.
Kukwakho nomba wokhuseleko ngokuchasene nohambo kunye neziliphu. Ngelixa ikhonkrithi egudileyo inxulunyaniswa nomngcipheko wokutyibilika kunye nohambo, ubume bekhonkrithi enestampu bunceda ukunciphisa umngcipheko.
Abaphandi banokuthi batyibilike kwiintsuku zemvula kodwa imigca ye-grout iyanceda ngokuhambisa amanzi. Ngokubhekisele kwezinye iimeko zemozulu, unokubona ukuba iipavile zilula kancinci ukubeka iinyawo zakho ezingenanto ngenxa yombane oshushu.
Inqanaba lokugcinwa phakathi kwekhonkrithi kunye neepavita zombini zinika kwaye zithathe. Ngelixa ikhonkrithi ifuna ukuthengiswa kwakhona rhoqo emva kweminyaka embalwa, iipavile nazo zifuna imigca phakathi kweeslabs ezizaliswe ngamaxesha athile.
Iindleko sesinye isitshixo kolu thelekiso. Njengoko sele siphonononge, iindleko zekhonkrithi ezinesitampu zingahluka naphi na ukusuka kwi-8 yeedola ukuya ngaphezulu kweedola ezili-18 ngenyawo lesikwere ngokuxhomekeke kuyilo ohamba nalo.
Xa kufikwa kulo mahluko, nangona kunjalo, ikhonkrithi inesibonelelo esicacileyo kuninzi lweendlela zokhetho. Iindleko zepheyinti zixhomekeke kwinto esetyenziswayo njengepavile.
Kwiphepha elingaphantsi, i-patio yamatye ayithengi kwaye iyabetha ikhonkrithi eninzi isitampu kwi- $ 4 ukuya kwi-8 yeenyawo nganye ngeenyawo. Ukunyuka ukusuka apho, izitena zokubhonkxa zibiza malunga ne-10 ukuya kwi-15 yeedola ngeenyawo zekwere kunye neesilayiti ezimalunga ne- $ 15 ukuya kwi-20 yeedola ngeenyawo.
Kukwakho neendleko eziphambili kunye nezexesha elide zokuqwalaselwa. Abanye balatha ukuba paver njengokhetho olungcono kuba ilula i-DIY kodwa ukuqesha okanye ukuthenga yonke into efunekayo ukuyenza yongeza ngokukhawuleza.
Iipareyitha nazo zinamathuba amaninzi okufuna ukutshintshwa okanye ukulungiswa. Ukugcinwa kwekhonkrithi ikakhulu kubeka ekuthengisweni kwakhona okunokubiza imali encinci njenge- $ 0.05 ukuya kwi-2.50 yeenyawo zenyawo nganye.
Ukukwazi ukustampu ipatio yakho esele ikhonkrithi kunokuxhomekeka kwizinto ezimbalwa. Okokuqala nokuphambili, ipatio yekhonkrithi eyonakaliswe kakhulu ayinakukwazi ukuphinda ivulwe. Ungahlala unxibelelana nekhontraktha ukubona ukuba ikhonkrithi yakho ingagcinwa isitampu kwaye ufumane uqikelelo kuyo.
Inqaku lesibini kukubekwa. Ukubeka ikhonkrithi entsha ngaphezulu kwendala kuya kongeza malunga ne-intshi okanye ezimbini ukuphakama. Oku kuhlala kulungile kodwa kunokuba ngumcimbi ukuba uchukumisa ukubekwa ecaleni kwakho okanye uphazamise ukubekwa kwamanyathelo.
Ukuba ipatio yakho iyahambelana nale khrayitheriya, ukunyathela ikhonkrithi yakho kufanelekile. Ikwanokubiza ixabiso eliphantsi, kuba ikhonkrithi ayibekwanga emhlabeni.
Njengotshintsho lwasekhaya, kunokuba bubulumko ukupeyinta ikhonkrithi enesitampu ukuze ilingane nelinye ikhaya.
Ikhonkrithi yinto enamaphiko ngoko ke ithambisa ipeyinti ngokulula xa isetyenziswa. Ukongeza zonke iipatio zekhonkrithi ziya kuhlala ziphela ngokuhamba kwexesha. Ke ukuba ufuna ukutshintsha inkangeleko yonke ngenxa yotshintsho kwisitayile okanye ukukhanya kwelanga unokugcina, okanye uphinde upeyinte ukuyinika inkangeleko entsha kraca.
Ngokungafaniyo nekhonkrithi yemveli, nangona kunjalo, ikhonkrithi enesitampu inendlela enokuchaphazela ngayo ipeyinti eqokelela ngaphezulu, okukhokelela ekudibaneni kwimijelo. Oku kunokuthintelwa ngokupeyinta ngesandla ikhonkrithi, kunokuba uyiqengqe okanye uyitshize.
Ngaphambi kokuba kuvulwe ipatio yekhonkrithi enesitampu, kukho amanyathelo ambalwa ekufuneka agqityiwe ukuze ikhonkrithi yamkele ipeyinti ngokusemandleni.
Okokuqala, ikhonkrithi enesitampu kufuneka inyange okungenani unyaka omnye ngaphambi kokuba kufakwe ipeyinti. Ukuba ipeyinti ifakwe phambi kokuba ikhonkrithi inyangeke, ityuwa kunye nokufuma okukukhonkrithi kuya kubangela ukuba ipeyinti ikhululeke ngaphezulu.
Ikhonkrithi enesitampu isebenza njengezinto ezintle zokuhambisa iiphuli. Inokwenziwa ukuba ifane nelitye elingenakulungeleka kumgangatho. Xa itywiniwe ngokufanelekileyo, isitampu sekhonkrithi siyanyangeka ukunxiba kwiikhemikhali zamachibi ezinjengechlorine kwaye isebenza kakuhle ngokuvezwa kwamanzi.
Umgangatho uya kudinga ukuthengiswa ngokutsha rhoqo, nangona kunjalo, ukuqinisekisa ukuba iyaqhubeka nokuxhathisa ukunxiba kule minyaka idlulileyo.
Uninzi lweekhontrakthi zicebisa ukutywina ikhonkrithi yedreyini yakho yekhonkrithi ubuncinci qho emva kweminyaka embalwa yeziphumo ezilungileyo. Kodwa, njengoko besesitshilo ngaphambili, oku akukho naphi na kufutshane notyalo mali njengofakelo lokuqala.
Xa ukhetha izinto zendlela yokuhamba okanye iphuli yedreyini, kubalulekile ukuba ukhethe umbandela ongazukupela iihambo kwaye uwele iinyawo ezimanzi.
Ngethamsanqa, kuba ikhonkrithi enesitampu inemvakalo, icekeceke kakhulu kunekhonkrithi eqhelekileyo. Kubalulekile ukukhumbula, nangona kunjalo, nokuba ikhonkrithi enesitampu inokuba ngumtyibilizi ukuba imanzi.
Kukho iindlela ezimbalwa zokunyusa ukumelana nekhonkrithi ukuze kugcinwe wonke umntu ekhuselekile echibini okanye emvuleni.
Ukunyathela ikhonkrithi ngoyilo olunzulu okanye oluneenkcukacha yenye yeendlela zokunyusa ukumelana nesiliphu sendlela yakho yokuhamba okanye ipaki.
Enye indlela yokunciphisa ithuba lokuwa kukongeza isongezo esingatyibilikisiyo kwisitampu sekhonkrithi esistampu. ukusebenza nawe ukuqinisekisa ukuba indlela yokuhamba okanye indawo esemgwaqweni iyamelana nokutyibilika.
Ndwendwela igalari yethu ye Uyilo lwepatio ngemibono engakumbi kwiyadi yekhaya lakho.
izobuya nini i-hoda
ixabisa malini i-kim kardashian
kudala etshate amaxilongo